WAX KA BARO XANNUUNKA DHIIG-KARKA
W/Q MAXAMED SHUCAYB AXMED |
W/Q MAXAMED SHUCAYB AXMED
Cudurka dhiig-karka waa cudur joogta ah oo kamid ah cudurada u gogol xaadha xaaladaha caafimaad ee dilaaga ah sida wadna istaga (heart attack), maskax oo dhiig-furmo (stroke), kelya oo fadhista(kidney failure), cudurada xididada dhiiga sameeya (vascular diseases), iyo sidoo kale xaalado kale oo cul-culus, hadaba qeybta koobaad ee maqaalkan waxaan ku eegi doonaa waxa uu yahay cudurkan, calaamadihiisa, iyo waxyaabaha sababa ama keeni kara.
Sidoo kale haduu alle idmo qeybta labaad waxaan ku eegi doonnaa habka loo daweeyo iyo talooyin muhiim ah oo ku socda bukaanka qaba cudurkan, talooyinkaas oo khuseeya nolol maalmeedkooda.
WAA MAXAY DHIIG-KARKU?
Cadaadiska dhiiga ama pressure ka dhiigu waxa uu ku xidhan yahay hadba awooda uu wadnuhu ku shaqaynayo, hadii si kale loo sharaxano waa marka dhiiga wadnuhu tuurayo ama ka imanayaa ee waraabinya dhamaan xubnaha jidhka intiisa kale uu cadaadis badan oo aan caadi ahayn kusoo tuurayo dhiiga sidoo kale waxa dhiigarka lagu qeexi karaa marka cadaadiska dhiiga ee halbowlaha wadnuhu (arterial blood pressure) ay ka sareeyaan heerka caadiga ah ama la aqbali karo ee u dhaxeeya 120—140 mmHg oo kor ah (systolic), iyo 80-90 mmHg oo hoos ah (diastolic), kor iyo hoos ama systolic iyo diastolic waxey ka tarjumayaan labada xaaladood ee uu wadnuhu maro had iyo jeer, oo kala ah marka uu wadnuhu isku soo ururayo si uu u saaro ama u tuuro dhiig, xaaladaas soomaalidu waxey u taqanaa sarre ama “kor” cadaadiskeeduna waa 120, halka marka uu kala baxo wadnuhu ee dhiigu soo galayao iyadna somalidu waxay u taqaana “hoos”, cadaadiskeeduna waa 80. eray bixinta kor/hoos waxey ka timid akhrinta nambarada, laakin xidhiidh lama laha eray bixinta saxda ah. Hadaba heer-korka dhiiga waxaa loo qeybiyaa afar qeybood oo kala ah inagoo ka qiyaas qadanayna laba qaybood oo kala ah.
1. Systolic blood pressure Cadaadiska sare oo ah marka wadnuhu isku soo ururo ama jiidmo ee isla markaana dhiiga tuurayo,
2. Diastolic blood pressure Cadaadiska Hoose waa marka uu wadnuhu soo karaar qaadanyo, ama nasanayo ee dhiig cusub qaadanayo si uu pump gareeyo.
1. CAADI (NORMAL): oo ah 120 kor ah, iyo 80 hoos ah.
2. DHIIG-KAR KAHOREEYE (PREHYPERTENSION): oo ah 120-140 kor ah, iyo 80-90 hoos ah, caadaadiskan nocan ahi ma aha dhiig kar, gaar ahaan dadka dhalin yarada ah waa wax caadi ah, laakin dadka waaweyn marka cadaadiska dhiigooda uu heerkan yimaado waxaa looga baqaa dhiigkar, waxaana loo yaqaanaa pre-hypertension stage, ama marxalada dhiig-kar ka horeysa.
3. MARXALADA 1-AAD EE DHIIG-KARKA: oo ah marka cadaadis dhiigu uu ka sareeyo 140-160 kor ah, iyo 90-100 hoos ah
4. MARXALADA 2-AAD EE DHIIG-KARKA: oo ah wixii ka badan 160 kor ah, iyo 100 hoos ah, xaladani waa xaalad digniin ah, hadii aan cadaadiska dhiiga bukaankana hoos loo soo celin wuxuu halis ugu jiraa xaalado kale oo cul-culus.
Dhiig-karka waxaa loo kala qeybiyaa laba qeybood oo kala ah mid bilaw ah oo ka dhashay sababo dhaxal ah ama deeganka uu ku nool yahay waxyaabo ay ku sababeen oo anay jirin wax la’og yahay oo sababay waxana loo yaqana (primary hypertension), waa kan ugu badan qiyaast ahaan xanuunka dhiigkarka waxana lagu qiyaasa 90%, halka nooca labaad sababtaan xaalado caafimaad oo kale sida buurnida cuntoyinka iyo jimicsi la’aanta iyo sigaarka (secondary hypertension) ama xaalado kale oo ku dhaca kelyaha xididada, wadnaha, iyo hab-maamulka dheecanada jidhka
Hadaba waa maxay sababta uu xanuunkani halista weyn ugu yahay adamaha sida la og yahay dhiig-karku waa cudur culus marka cadaadiska dhiiggu sareeyo ama dhiig kar jiro, wadnahaagu waa inuu u shaqeeyo si ka xoog badan intii caadiga ahayd si uu dhiigga u dhaqaajiyo oo u gaadhsiiyo dhamaan xubnaha jidhka oo dhan.
Inta badan dhiig-karku waa cudur shibane ah waana sababta keentay in laguba naaneyso “Dilaaga Aamusan” (silent killer) bukaanada qaar waxey qabaan sanado badan iyagoon dareensaneyn, in badan oo kalena waxabay ku war helaan iyagoo maraya baadhitaano guud halka qaarkoodna kuba waabariistaan wadno xanuun iyo wixii la mid ah iyagoon ogeyn waxa sababay in uu yahay dhiig-kar, balse waxaa jira calaamado mararka qaar la arko waxaana kamid ah madax-xanuun gaar ahaan qeybta dambe ee madaxa, warareer, araga oo wax iska badalaan, barar, iyo mararka qaar suuxdin. laakin calaamadahaas ma aha kuwo dhamaantood lala xidhiidhiyo dhiig-karka waxaana la sheegaa in qaarkood ay yihiin xaalado nafsiyan (psychological) ugu dhaca dadka ogaaday in ay dhiig-kar qabaan. Dhanka kale dhiig-karku hadii uu yahay secondary oo uu la xadhiidho xaalad kale oo caafimaad waxaa la socon kara caalamado kale oo la xidhiidha hadba nooca xanuun ee ku sababay dhiig-karka sida:
• Dareenka gacmaha ama lugaha oo taga ama lawaayo ( numbness)
• dhiig sanka ka yimaada ama qufac dhiig wata (epistaxis. Hymoptysis)
• Neef aad ukhtar ah oo qofka qabata.
MAXAA SABABA DHIIG-KARKA?
Marka laga tago secondary hypertension oo ay sababaan cuduro kale, boqolkiiba sagaashan (90%) lama oga waxyaabaha sababa dhiig-karka, balse waxaa jira dhaxal-sidayaal (genetic) iyo xalado deeganka la xidhiidha (environmental factors) oo isku tagay ayaa loo aaneeyaa sababahan :
Dhaxal: qoyskaaga hadii uu dhiig-karku ku jiro, fursada in uu kugu dhoco waa laba jibaar marka loo eego dadka kale ee aan asal u laheyn cudurkan, (sababtuna ma cada).
Isir: dhiig-karku wuxuu ku badan yahay dadka madowga ah marka loo barbar dhigo dadka cadaanka ah, (sababtuna ma cada)
Da’da: dhiig-karka wuxuu ku badan yahay dadka da’da ah,wuxuuna si gaar ah ugu badan yahay raga.
Buurnida: mar kasta oo misaankaga baruureed badan yahay, wadnahaagu wuxuu u baahanayaa in uu awood dheeraad ah u isticmaalo sidii uu jirka ku wada gaadhsiin lahaa dhiig taasina waxay kordhisaa kor u kaca cadaadiska dhiigaaga.
Jimicsi La’aanta: jimicsi la’aanta waxaa lala xidhiidhiya sababaha dhaliya ama uga dara dhiig-karka.
Sigaarka ama Tubakada: kaliya ma aha in maadooyinka ku jira ay kor u qaadayaan cadaadiska dhiiga balse sidoo kale waxay dhaawacayaan xididada taasoo keeneysa in ay adkaadaan islamarkaane yaraadaan.
CUSBADA: Sida caadiga ah cusbada iyo biyaha ku dheeraadka ah jidhka waxa saara kelyaha oo kaadida ku dara, balse qofku hadii uu qaato milix badan oo anay kelyuhu saari Karin, wuxuu jidhku u baahdaa in uu sidoo kale biyaha dib uga soo nuugo kelyaha si uu u saxo dheeli-tirka milixda iyo biyaha, taasoo sababta in biyo badan iyo milix ay aheyd in jidhka laga saara ay dib ugu soo noqoto, taasoo sababta in dheecaanka ku jira gudaha xididada ay ka bataan sidi caadiga aheyd, waxaana ka dhalanaya arimahaasoo idil in uu kor u koco cadaadiska dhiiga.
AlCOHOL /KHAMRADA: khamrigu waxay dhaawaceysaa xididada, waxayna kor u qaadeysaa heer dhiiga.
WALWALKA: Bini’aamku marka uu walwalsan yahay jdhkiisu wuxuu ku jiraa xaalad heegan ah, taasoo macnaheedu yahay in garaaca wadnuhu kor u kaca dhiig badana uu tuuro wadnuhu xididada jidhka ee dhiiga qadana ay cidhidhi noqdaan, arimahan waxaa sababa hormoono uu jidhku soo daayo waqtiga walwalka, hadaba lama hubo in walwalku abuuro dhiigkarka joogta ah, balse waxaa la hubaa in uu kor u qaado cadaadiska dhiiga si ku meel gaadh ah, isla markaana uu ku kiciyo qofkii hore u qabay, balse hadii uu bato ama uu soo laalaabto wuxuu isku badali karaa mid joogta ah.
CUDURADA QAAR: sida sonkorta ama macaanka, Chronic Kidney diseases Cuduro ku dhaca xaga kalyaha Diseases of kidney blood vessels, xanuuno ku dhacay Xidada kalyaha. Hormonal dis orders (Khalkhal xaga dheecamada jidhka), Tumors ( fiixaha ama buroyinka cancerka).
UURKA: dhiig-karka ku dhaca haweenka uurka leh aad ayuu u badan yahay, waana mowduuc weyn oo mudan in gaar looga hadlo.
Sidoo kale marka la garanayo waxa sababa xanuunkan waxa kale oo loo sababayn karaa sababahan.
Hadaba aynu is weydiino cudurkan sida loo maareeyo ? Maxaase looga baahan yahay qofka qaba in uu noloshiisa ka badalo, arimahaa oo idil waxaan ku wada ogaan doonnaa maqaalkeena xiga insha’allaahu tacaaa.
HABKA LOO CABIRO DHIIG KARKA AMA DHIIGABA
Dhiigkarka waxaa in ta badan lagu cabiraa cabirka (millimeters of mercury mm).
Inta badan waxaa laysku raacsan yahay in 120/80 yahay caadiga,
Hadii cabirka dhiigu dhawr jeer oo kala duwan uu noqodo ama ku dhawaado
140/90 waxaad u baahan tahay in aad dhakhtar la xidhiidhid.
Ama shaybaadho caafimaad oo ay ka mid yihiin, iyo qalabka caafimaad ee ay ka mid yihiin:
Dhiiga kalyaha Kidney function test (urea.creatinine),
kaadi (Urine analysis),
Cabirka wadnaha (ECG AMA EKG) IWM.
Ha lagaa soo cabbiro cadaadiska dhiigga. Dhakhtarkaaga ayaa kuu sheegi doona haddii aad qabtid dhiig kar ama cadaadis dhiig oo sareeya. Cadaadiska dhiig ee la rabo waa 120/80. xitaa haddii cadaadiska dhiigaagu ku siman yahay tirada la rabo, ha lagaa cabbiro ugu yaraan hal mar sannadkii.
Xukunka la wareeg: raac talaabooyinka lagu yareynayo cadaadiska dhiiggaaga haddii uu aad u sareeyo. qaad imika talaabooyinka aad caafimaad ku heli karto, si hadhow aanuu kuugu dhicin dhiig kar ama cadaadis dhiig oo sareeya. si aad uga badbaadid dhiig kar:
Higso miisaan caafimaad leh : Isku day inaanuu kugu soo kordhin miisaan dheeraad ahi. Iska yaree miisaanka haddii miisaankaagu sareeyo. Isku day inaad si tartiib ah miisaanka u lumisid, qiyaastii nus rodol ilaa 1 rodol todobaad kasta ilaa aad ka gaadheysid miisaan caafimaad leh.
Noqo qof firfircoon maalin kasta. Waa aad socon karta, ciyaari kartaa ha ahaate kubad ciyaar dhaqameed iyo ciyaraha kaleba, waxaad kale oo isticmaali kartaa salaanka ama jaranjarada dhismayaasha ama waxa kale oo aad sameyn kartaa firfircooni kasta oo aad jeceshahay.
Yaree milixda iyo soodhiyamka aad ku isticmaashid karinta cuntada. iibso cuntooyinka lagu dul qoray “ma laha soodhiyam” (sodium free), “soodhiyam yar” (low sodium) ama “soodhiyam la yareeyay” (reduced sodium). Miiska cuntada ka qaad weelka milixda. – jooji khamriga iyo balwadaha xun ee diintu xarantinimaysay sidoo kale dumarka uurka lihi waa inaanay cabbin wax alcohol ah . Haddii aad leedahay cadaadis dhiig oo sareeya ama dhiig kar, ha joojin halganka wax-ka-qabashada. qaad talaabooyin waxana suurogal ah inaad xakameysid ama yareysid cadaadiska dhiigga ee sareeya ama dhiig karka aad qabtid.
Halisaha uu sababi karo xanuunka dhiig karku hadaan la daweyn
Xanuunka dhiig karka haddii aan la daweyn ama aan la kantaroolin waxa uu korrdhin karaa suurtogalnimada ah inuu kugu dhaco:
xidid dhiig oo maskaxda ka xidhma sababana faalig ama qalal
dhibaatooyin kelyaha ku dhaca sida kelyaha oo shaqada gaba
dhibaatooyin indhaha ku dhaca indhaha oo aad beesho
dhimasho – wadne istaag
Iyo dhibaatooyin kale oo badan